रूस को दिन एयर बेडा ... यो महिमित छुट्टी को नाम pronouncing, यो असम्भाव्य छ यसलाई कसरी लामो उल्लेख बारेमा सोच जो कोहीले छ। र केही प्रश्न खडा: "के यो स्मरणीय मिति छ अन्य, को रूपमा जानिन्छ फरक छ को एयर बेडा दिन?" वास्तवमा, नाम व्यावहारिक अर्को ढोका स्थित महत्त्वपूर्ण दिन को क्यालेन्डर मा, समान छन्। त्यसैले, सायद यो एक छुट्टी, जो लोकप्रिय फरक भनिन्छ गर्नुपर्छ? गरेको छानबिन गरौं। पहिलो नाम निकोलस द्वितीय संग धेरै गहिरो-गाडेको, केही साथीहरूले हुनत Solemn दिन छ। र वास्तवमा उहाँले रूस मा एक वास्तविक शक्ति VF भएको छ जो एक थियो। तथापि, पार्कहरू बेलुन र airships अघि अस्तित्व।
यो सबै लामो पहिले त थाले ...
वैमानिकी आयोग 1869 मा रूस उत्पत्ति। त्यो तिनीहरूले युद्ध मा सहयोग गर्न सक्षम छन् भने प्रभावकारी गुब्बारे कसरी निर्धारण गर्न जिम्मेवारी चार्ज थियो। एक वर्ष पछि, हाम्रो देश को आकाश मा आयोग को प्रयासमा मार्फत पहिलो बेलुन हुर्केका थिए, र 16 वर्ष पछि त्यहाँ देशको पहिलो छुट्टै, स्वतन्त्र संरचना बनेको, वैमानिकी को पार्क हुनेछ। निस्सन्देह, पाइलटहरूले, वा बरु, समय को aviators, छैन आधुनिक किनेकी संग तुलना गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले पनि के अवसर आफ्नो नातिनातिनी पाउनेछन् छैन कल्पना गर्न सक्छ। तर त्यसपछि पनि, यो बोल्ड बेलेम, बौद्धिक, राम्रो-शिक्षित पेशेवरों थियो। धेरै को सबै भन्दा राम्रो। आकाश मा उड्नु, पाइलटहरूले, भौतिक को मूल कुराहरू सिकेका पहिलो हात वैमानिकी को व्यवस्था खोज। तर सबै भन्दा महत्वपूर्ण - तिनीहरूले निरन्तर जो आकाशतिर गए आफ्नो फोन, सुधार गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो हावा को लाभ, सबै कामहरू र रेकर्ड सुरु तिनीहरूलाई - पहिलो balloonists हाम्रो देश। तिनीहरूले पनि केटाहरू ईर्ष्या गरे। र हावा पार्क रूस को एयर बेडा को आधिकारिक दिन पछि मनाउन थाले हुनत, आजको विमान को पुर्खा छलफल गर्न सकिन्छ।
बेलुन, airships र कबूतर
चाखलाग्दो कुरा, पहिलो पार्क, सँगै पाइलटहरूले ल्याउन, balloonists, watchtowers र ... परेवा को काम को लागि जिम्मेवार थियो जो आयोग, पेश गरियो। त्यतिबेलादेखि चालक, आगो समायोजन अन्वेषण उत्पादन, को युद्ध मा भाग छन्। युद्ध को मन्त्री पनि पेस्कोभ, नोभगोरोड, र धेरै अन्य शहर मा एक विशेष "हावा" टोली सिर्जना गरियो। रूस को सम्पूर्ण मा त 65 बेलुन थिए। 1908 मा, पार्क airships थपियो। तथापि, रूसी एयर बेडा दिन अझै पनि मनाइन्छ: नवाचारै र airships शंकास्पद सैन्य अधिकारीहरु डराएका थिए। त्यो रूस मा एक उडान विद्यालय खोल्न 1910 मा छाडेनन्। यो छिटो पहिले नै (यो समयमा त्यहाँ धेरै सात रूपमा विमानहरु थिए!) छ कि देखिन्थ्यो, तपाईं रूस को एयर बेडा को दिन मनाउन गर्न सक्नुहुन्छ। तर पहिलो squadrons (1911) यो अवस्था परिवर्तन भएको छैन को पनि उपस्थिति: को पाइलटहरूले अझै ईन्जिनियरिङ् व्यवस्थापन गर्न अधीनस्थ छन्। मात्र 1912 मा, निकोलस द्वितीय स्थिति परिवर्तन भयो। उहाँले वैमानिकी मा केवल विशेष र सामान्य कर्मचारी गर्न subordinated जो एक विशेष टुकडा, सिर्जना गरियो। लागि पहिलो पटक रूस को एयर बेडा को दिवस मनाइन्छ अगस्ट 1912 मा दोस्रो थियो। निस्सन्देह, कुनै छुट्टी, कुनै बधाई थिएनन्, तर घटना भएको थियो। त्यतिबेलादेखि छैन पाइलटहरूले मात्र, तर पनि उडान उपकरणहरू सेवा गर्ने सबैलाई विशेष गरी प्रिय मान्छे भयो।
र stalin र सर्वोच्च परिषद र पुटिन
उड्डयन भूमिका overstate गर्न गाह्रो छ। यो थाह, र आई वी stalin। यो अगस्ट 18, 1933 देखि, को सोभियत संघ को लहर समारोह को दिन मनाउन निर्णय गर्ने उहाँले थियो। देश मा छुट्टी मन परायो। समय बितिसकेको छ, तर सोभियत संघ संकुचन र नयाँ रूस गर्दा परम्परा कायम राखेर मात्र जन्म भएको थियो सर्वोच्च परिषद गर्दा, म छोड्न निर्णय उड्डयन दिन उत्सव पात्रोमा। उर्दी को नवीनतम संशोधन 2006 मा भयो। उहाँ "वायु सेना को दिन स्थापना मा।" अघिल्लो कागजातको अंक को एक रद्द छुट्टी स्मरणीय दिन छलफल गर्न सशस्त्र बलहरु मा सुरु भयो। यो सैन्य उड्डयन को प्रतिष्ठा कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसपछि भएकोले एयर बेडा दिन अगस्ट 12 मा मनाइन्छ। परिवारमा कर्तव्य स्टेशन लागि पाइलटहरूले बधाई। तर, वायु सेना, अगस्त तेस्रो आइतबार आयोजित चिनो सबै सार्वजनिक समारोह। रूसी एयर बेडा दिवस 2013 मा 18 अगस्ट र यस वर्ष यो 17 अगस्ट मा पतन मनाइन्छ। हामी पर्खिरहेका छन्!
विदाई Recruits - एक विश्वसनीय समर्थन!
को वार्षिकोत्सव मा स्लाइड शो: विचार
राम्रो विवाह फोटोग्राफर वा कसरी competently चयन गर्न?
स्याउ मा नस्ल लाईकीराको। कसरी किरा सामना गर्न
फाइबर - यो panacea छ?
कम्पनी AvtoVAZ को उदाहरण Swot विश्लेषण
चौंरी घाँस काट्ने उपकरण Gardena: एक सिंहावलोकन, विनिर्देशों, प्रकार र मूल्यांकन
खट्टा क्रीम मा बीफ कलेजो - कुनै पनि garnish लागि स्वादिष्ट goulash
कसरी हावा आकर्षित गर्न? सँगै छानबीन उदाहरण परिदृश्य र पोर्ट्रेट
"- प्राग मास्को" तालिम। रेल "मास्को - प्राग": समय तालिका, भाडा, मार्ग
घर मा pilaf कसरी खाना पकाउनु?
औषधि "Tsitrolyuks": प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक डाक्टर, वर्णन र संरचना
छोराछोरीको टिभी श्रृंखला "Luntik"। मजेदार वर्ण - Luntik